Tag: ịde blọgụ | Martech Zone
Tag: ịde blọgụ
Blog RPM gị na-emebi emebi, mana Not naghị emeri Ọsọ ahụ!
Thursday, May 10, 2007 Satọde, Febụwarị 25, 2017 Douglas Karr
Wezụga enyemaka m na-agbalị ịnye ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ site na blọọgụ a, ana m enyere ndị na-ede blọgụ aka aka. O di nwute, anaghi m etinye oge buru ibu ime nke ahu dika m choro - aghaghi m arusi oru iji kwụọ ego. Nyaahụ m wepụrụ ụbọchị ma gaa ogbako weebụ mpaghara. Nzukọ ahụ dị egwu, ụbọchị kọmpat jupụtara na oge elekere 1 nke jupụtara na ozi